အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ငယ်လေးလုံး ဖန်တီးဖို့စဉ်းစားနေသူတို့အတွက် ချစ်စဖွယ် အိမ်လေးများ – Trend.com.mm
စိတ်ကူးယဉ်ဖူးလား … နောက် နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ဆို ငါ့ရဲ့ အိမ်လေးက ဘယ်လိုဆိုပြီး တွေးခဲ့မိတာလေးတွေများ ရှိလား? တကယ်လို့ သင်ဟာ တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်တဲ့သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲနေရာမှာ နေထိုင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင် ဒီလိုအိမ်ငယ်လေးတွေကလည်း သင့်တို့ရဲ့စိတ်ကို ပိုပြီး ကြည်နူးစေရပါတယ်။ ကဲ… ဘယ်လိုချစ်စဖွယ် အိမ်ငယ်လေးတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် ….
စိတျကူးယဉျဖူးလား … နောကျ နှဈပေါငျး ဘယျလောကျဆို ငါ့ရဲ့ အိမျလေးက ဘယျလိုဆိုပွီး တှေးခဲ့မိတာလေးတှမြေား ရှိလား? တကယျလို့ သငျဟာ တဈယောကျတညျးပဲဖွဈဖွဈ၊ ခဈြတဲ့သူနဲ့ နှဈယောကျတညျး ငွိမျးခမျြးတိတျဆိတျတဲနရောမှာ နထေိုငျဖို့စဉျးစားထားတယျဆိုရငျ ဒီလိုအိမျငယျလေးတှကေလညျး သငျ့တို့ရဲ့စိတျကို ပိုပွီး ကွညျနူးစရေပါတယျ။ ကဲ… ဘယျလိုခဈြစဖှယျ အိမျငယျလေးတှလေညျးဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ ….